बलि प्रथा : सिडिओबाट जारी एक सूचनाले अस्थालाई रोक्न सक्ला र ? -
बलि प्रथा : सिडिओबाट जारी एक सूचनाले अस्थालाई रोक्न सक्ला र ?
VoiceNp	प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन २५, २०७७ समय: १६:४८:२९
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको असर देखिएको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मुख्य पर्व दसैँ कात्तिक १ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसायका सिलसिलामा टाढा पुगेकाहरुसमेत दसैँ मान्न गाउँघर फर्कने चलन छ । तर यस वर्ष दसैँको त्यो परम्परा र रीतिरिवाजलाई पनि कोरोनाले प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
देवी दुर्गाको नाममा दसैँघर र मुल चोकमा दिइने बलि यस पटक सरकारले औपचारिक रुपमै रोकेको छ । जंगबहादुर राणाको पालादेखि शुरु भएको दसैँघर र मुलचोकमा दिइने बलि प्रथा कोरोनाको कहरकै कारण यसपटक रोकिएको हो ।
बलि व्यवस्था हेर्ने कौसी तोसाखानामा बसेको बैठकले यो वर्षको दसैँमा मूल घरमा दिइने बलि रोक्ने निर्णय भदौको दोस्रो हप्तामै गरेको थियो । सरोकारवाला मन्त्रालयहरु, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, पुरोहित र सरोकारवाला निकायको बैठकले समेत मूल चोकमा दिने बलि कोरोना महामाहारीका कारण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दसैँका अवसरमा तीन दिनसम्म १६२ बोका, त्यति नै संख्यामा राँगाको बलि दिने चलन थियो । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको कारण भिडभाडजन्य कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ । सोही अनुसार बलि प्रथालाई रोकिएको हो ।
सरकारले गत चैते दसैँमा पनि मूलचोकको बलि स्थगित गरेको थियो । यो त सरकारी स्तरबाट दिइने बलि भएका कारण रोक्न सहज भएको हो तर स्थानीयस्तरमा गाउँ गाउँमा दुर्गा मन्दिरमा बलि दिने प्रचलन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले कोरोनाको कहरमा बलि नदिनू भनेर सूचना जारी गर्दैमा त्यो परम्परा रोकिएला त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरु देवी दुर्गालाई खुशी पार्नका लागि बलि दिने गर्दछन् । विशेषगरी सप्तमी, अष्टमी र नवमीका दिन शक्तिपीठहरुमा बलि दिने गरिन्छ । कयौंले घरमै पनि खसी–बोकाको बलि दिने गर्दछन् ।
यसपटक विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिले सूचना जारी गरेर दसैँका अवसरमा हुने मेला, भिडभाड तथा बलि रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई मानव भनेको मूर्त र देवीदेवता भनेको अमूर्त कुरा भएकाले पहिला मानवको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोना महामारीको बेला मन्दिरहरुमा भिडभाड नहोस् भन्ने उद्देश्यले केही प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँदै उनले आस्था, संस्कृति, परम्पराका लागि कुनै कानुन नलाग्ने र कसैको धर्म, आस्थामा ठेस पुर्याउने वा रोक्ने उद्देश्य पनि नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले समाजमा महामारी नफैलियोस् भनेर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
‘खसीबोकाको साटो घिरौँला, कुभिण्डोलगायतलाई पनि बलि दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामील रोक लगाएका छैनौँ । एउटा खसीको बलि दिन आउँदा परिवारका पाँचजना भन्दा बढी सदस्य आएका हुन्छन्, त्यसले गर्दा बलि दिने ठाउँमा अत्याधिक भिड हुन्छ, परिणामस्वरुप संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ ।’ आफूहरुले त्यसलाई रोक्न सकभर प्रयास गर्ने उनले बताए ।
यद्यपि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव (पर्सा) ले कोरोनाको नाममा कसैको आस्था वा विश्वासलाई रोक्न नसकिने बताए । ‘भगवतीको नाममा बलि दिने प्रथा सदियौंदेखि चल्दै आएको हो, त्यसमा जनताको आस्था र गहिरो विश्वास छ, मानिसका मनोकांक्षा पुरा भएका कारण बलि दिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौँदेखि यो परम्परा चल्दै आएको हो, कोरोनाको नाममा त्यसलाई रोक्न सकिँदैन ।’
उनले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि बलि दिने ठाउँलाई व्यवस्थित तुल्याउन सकिने बताए । ‘सामाजिक दुरी कायम गरेर बलि दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन ।’
बलि दिने ठाउँमा भिडभाड हुन नदिन व्यवस्थापन गर्ने काम प्रहरी प्रशासनको भएको सांसद यादव बताउँछन् । ‘पुलिस प्रशासनले कसैको आस्था र विश्वासलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘भक्तजनहरु स्वतस्फूर्त रुपले भगवतीको मन्दिरमा गएर बलि चढाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
यसरी शक्तिपीठमा गएर बलि दिने चलन तराई मधेशमा बढी नै हुन्छ । पहाडमा घर–घरमै आफ्नो क्षमताअनुसार बलि दिने चलन भए पनि तराई मधेशमा शक्तिपीठहरुमा गएर बलि दिने गर्दछन् । यसरी बलि दिनेहरुले विभिन्न अवसरमा भाकल गरेका हुन्छन् ।
दुर्गा मन्दिरमा बलि दिनका लागि कतिपय ठाउँमा एकदिन अगाडिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा दुईचार दिनअघि नै नाम लेखाउनुपर्ने हुन्छ । बलि दिने ठाउँमा भएको भिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीसमेत परिचालन हुने गर्दछ ।
नेपालका कतिपय शक्तिपीठमा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजनहरु आएर बलि दिने गरेको पाइन्छ । मानिसमा स्वतस्फूर्त रुपमा देखिएको यो अस्थाका कारण सिडिओको एउटा सूचनाका आधारमा बलि रोकिने सम्भावना नरहेको जनकपुरका पत्रकार वृजकुमार यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न यस्तो रणनीति अपनाउनु आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर आस्था र धर्मलाई कोरोना वा अन्य महामारीले रोक्न सक्दैन र आजसम्म रोक्न सकेको पनि छैन ।’
त्यसो त, प्रत्येक दसैँको बेलामा विभिन्न संघ संस्थाले बलि प्रथा रोक्न माग गर्दै आएका छन् । गढीमाइ मेलाको पूर्व सन्ध्यामा पनि यस्तै माग जोडतोडले उठ्ने गर्दछ । तर आस्थाका अगाडि यस्ता अभियान सफल हुन सकेको छैन । बलि प्रथालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको थियो तर त्यो रोकिएन ।
हिन्दु धर्मका लागि वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव कसैको आस्थालाई कुनै पनि कानुनले मोड्न नसक्ने दावी गर्दछन् । ‘कोरोना संक्रमण फैलिने डरले काठमाडौंमा मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा पनि सरकारले रोक्ने प्रयास गरेको थियो तर रोकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने जहाँ आस्था हुन्छ, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ कसैको कुनै तागत काम लाग्दैन ।’
दुर्गा पूजा पनि हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थासँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए । ‘भिडभाडालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ तर बलि नै रोक्न भने मिल्दैन ।’
सिरहा औरही गाउँपालिकाका श्रीदेव यादवको परिवारले प्रत्येक वर्ष दुर्गालाई भाकल गरेको हुन्छ । यसपाली पनि उनले दुर्गालाई चढाउन बोका तयार पारेका छन् । तर सरकारले जारी गरेको सूचनाले उनलाई केही चिन्तित बनाए पनि बलि दिन नरोकिने उनी बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निर्णय जायज हो तर परम्परादेखि चल्दै आएको बलि प्रथालाई रोक्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।
मन्दिरमा भिडभाड नहोस् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने र प्रशासनले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले मन्दिरमा जान दिएन भने घरमै दुर्गा भगवतीलाई सम्झेर बोकाको बलि दिनेछौं, आस्था भनेको आस्था नै हो । मन्दिरै जानुपर्छ भन्ने होइन, दुर्गा भगवतीको नाममा जहाँबाट पनि बलि दिन सकिन्छ ।’ रातोपाटी बाट